Phosphite's Kaviri Mutemo - Potatoes News
Phosphite kuita kaviri
Ehe, iyo phosphite, kwete phosphate. Kunyange iri yemakemikari yakafanana neinonyanya kushandiswa uye yakakosha phosphate - iyo 'P' muNPK fetiraiza mnemonic - phosphite (PO3) 'inoderedzwa fomu' ye phosphate (PO4). Atomu imwe chete yeokisijeni inoita musiyano wese: zvirimwa hazvigone kuwana phosphorus mune yayo phosphite fomu.
Vamwe varimi vanenge vatoziva nezve phosphite chinobatika muchirongwa chekudzvanyirira chirwere, uko kwave kuratidza chiitiko chinoshamisa kupokana nezvirwere zvinokonzerwa ne oomycetes senge downy mildew uye kunonoka kuora. Mune miedzo mizhinji, vaongorori uye vezvekurima vaona kuti phosphite, kana ichinge ishandiswa pamwe chete nemiyero yakaderedzwa yefungicide, yakakwanisa kupa zvirimwa zvemazamu mbichana nekuchengetedzeka kubva ku blight yekupedzisira seyakazara-mishonga yekurapa fungicide.
Izvi zvaratidza kuve zvakakosha mumakore achangopfuura, mukumira kweyakaomarara-yakasimba yekuchengetedza gohwo chigadzirwa mutemo uyo wakadzora kushandiswa kwe 'go-to' fungicide actives senge mancozeb uye chlorothalonil.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ichi 'chirwere kudzvinyirira', pane kudzora chirwere. Phosphites haizombonunure zana muzana kutonga, uye havazoite zvinopesana nezvokwadi 'fungal hosha senge Septoria mune gorosi. Uye masayendisiti achiri kukakavadzana nemaitiro chaiwo ekuita: zvinofungidzirwa kuti 'batidza' mamwe majeni anokosha mumiti yekugamuchira (kureva mbatatisi) ayo anobatsira mukudzivirira, asi dzimwe dzidziso dzakawandisa.
Izvo zvakare zvakakosha - uye uko vamwe varimi vauya vasina kugadzikana - ndeyekuti haasi ese phosphites akagadzirwa (kana zvirinani akanyoreswa) akaenzana. Kunyangwe vangave vakafanana semakemikari, murimi anoda kutora fomu yeInternated Crop Management kuburikidza nekuunza phosphite kuchirongwa chefungicide anofanira kushandisa chigadzirwa chine kunyoreswa kwemushonga wezvipembenene. OMEX® Cell Simba Phorcephitesemuenzaniso, ine yakazara US kunyoresa seye systemic fungicide yekudzora pasiy mildew, Pythium, Phytopthora uye zvimwe zvirwere, pamhando dzakasiyana dzezvirimwa zvinosanganisira mbatatisi - uko kukwezva kwakawedzerwa inguva yayo yekukohwa kwemazuva-zero.
asi OMEX® zvakare ine imwezve phosphite kunyoreswa - chigadzirwa chinonzi 4pHoric. Izvi zvakanyoreswa se fetiraiza - nekuti apa ndipo panotangira kuve nephosphite.
Apa ndipo patinoona phosphite muchiitiko chayo chechipiri. Inoiswa pamwero wakakwira, inopa iyo fungicidal inhibition yatichangobva kukurukura. Asi kana ichiiswa pamatanho akaderera, pazasi peayo anokwanisa kupa fungicidal chiitiko, inogona zvakare kuita seyakakosha biostimulant.
Biostimulants akagashira anowedzera kutarisisa uye masendimita masendimita mumakore apfuura. Iwo mukirasi nyowani yemakemikari ekudzivirira zvirimwa ayo asiri nyore kuiswa muzvikamu, kana fetiraiza kana mishonga yekuuraya zvipuka kana zvinovaka muviri. Asi kana ichinge yakashandiswa kuzvirimwa, zvinokwanisa kukanganisa kukura uye kusimukira munzira dzakawanda, pahupenyu hwese hwechirimwa.
Semuenzaniso, mamwe ma biostimulants anokanganisa kumera kwembeu, mamwe ma 'prime' masisitimu ekudzivirira kana mhinduro dzekunetseka. Vanogona kugonesa kupora kubva kune abiotic zvinhu, sekunyanyisa kwehunyoro kana tembiricha, kugadzirisa kunatsa uye kuwana kwemvura, uye nekuvandudza mhando yezvirimwa zvinogadzirwa - ruvara kana shuga zvirimo, semuenzaniso. Vamwe vanotokurudzira kudyidzana kuri nani pakati pemidzi yemuti uye utachiona hwevhu, mune izvo zvinozivikanwa se 'rhizosphere'.
Saka, ndezvipi biostimulant zvivakwa izvo phosphite inopa murimi wemazamu? Huye, chinokatyamadza zvakanyanya pane kukura kwemidzi, uko ongororo dzakaratidza kuti phosphite inokonzeresa maitiro emagetsi mukati memuti. Izvi zvinokurudzira muti kuti ugadzirise zvekare enzyme zviitiko, zvichikurudzira kukura kwemidzi.
Zvidzidzo zvakaratidza kusimudzira midzi kusvika pamakumi mashanu muzana mune zvimwe zvirimwa. Izvo zvaive zvisiri zvembatatari, kunyangwe patakaitisa edu ega glasshouse miedzo, isu takaona chinobatsira mhedzisiro kubva mukushandisa kweiyo foliar kurapwa pane tuber kutanga.
Nhamba dzeTuber dzakawedzera ne12.5 muzana. Inoenderana nedzidziso yekuti chirimwa chembatatisi chine midzi inoshanda zvakanyanya inogona kutsigira mamwe machubhu, nepo kuwedzera kunotevera kwemidzi biomass kunogona kunongedzera - kumwe kutsvagurudza kunogona kusimbisa - kune zvingangodaro zvinobatsira kubva mukuvandudzwa kwemvura nekuwana kwekudya.
Kune zvekare humbowo - iyo American Journal of Plant Sayenzi yakaburitsa mhedzisiro kubva kuArgentina mbatatisi kuyedzwa - iko kushandiswa kwephosphite kune mbeu tubers hakugone chete kudzora nguva pakati pekudyara nekubuda, asi zvakare kwakasimudzira kukura kwekutanga: imwe biostimulant mhedzisiro mukuita.
Ko phosphite inozove yakanyanya kuwanda-matarenda? Zvichida: inzvimbo inomhanya-mhanya, uye kwasara mibvunzo yakawanda isina mhinduro pamusoro pemaitiro echokwadi ephosphite. Iko zvakare kune zvemutemo maficha: kushomeka kwekuzivikanwa kwe biostimulants zvinodzivirira zvinovaisa mune chimwe chinhu chegrey nzvimbo, kunyangwe zvirevo zveUS zvemutemo zvakaiswa.
Izvo zvine chokwadi ndechekuti kunyangwe neaya maviri mashandisiro, varimi vembatatisi vane chikonzero chakasimba chekushandisa phosphite seyakashaikwa chinongedzo mune yavo 2021 agronomic armory.
Dzidza zvakawanda pa www.netson.com.
/ fetiraiza-uye-mishonga yezvipembenene / goho-dziviriro /
Tags: AdsKUDzivirirazvigadzirwa zvekuchengetedza gohomapiritsi emashizha
Yekumuka-kusimudzira kune varimi pane biostimulants & biofertilizers
Kuwanda kweklorini mufetiraiza kunogona kukuvadza zvirimwa